Isku-aadka Wareegga 16ka Champions League Oo La Sii Saadaaliyay Real Madrid Vs Chelsea Iyo Manchester United Vs PSG
HomeWararka CiyaarahaIsku-aadka Wareegga 16ka Champions League oo la sii Saadaaliyay Real Madrid vs Chelsea iyo Manchester United vs PSG
December 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Warka Xiisaha Leh 0
Kooxaha horyaalka Premier League ayaa waajahaya cabsi la xidhiidha isku-aadka wareegga 16ka Champions League, sidaas oo kalena waxa ah Real Madrid oo xilli ciyaareedkii hore kusoo hadhay wareegga afar-dhamaadka, hase yeesehee PSG ayaa ogsoon inay ku beegmayso mid ka mid ah kooxaha ugu adag.
Chelsea oo koobka difaacanaysa ayay isku duruuf ku sugan yihiin Paris Saint-Germain kaddib markii ay kaalinta labaad kaga soo baxeen Group H, taas oo ka dhigan inay afka ka geli doonaan mid ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub ee aanay ku jirin Juventus oo ay isku hormo kasoo baxeen iyo kuwa Ingiriiska oo uu sharcigu kala badbaadinayo.
Tababare Thomas Tuchel ayaa sida uu wargeyska Marca saadaaliyey, waxay kooxdiisu ku dhici doontaa Real Madrid oo ay wareegga 16ka ku kala bixi doonaan. Haddii ay sidani dhacdo, waa celiska ciyaartii semi-finalka ee xilli ciyaareedkii hore oo ay Chelsea guuleysatay, una gudubtay finalka oo ay Man City isku heleen, koobkana ay kaga qaadeen gool uu Kai Havertz u dhaliyey.
Kooxda reer Spain ee Real Madrid oo kaalinta koowaad kaga soo baxday Group D, waxay kala badbaadi doonaan kooxaha reer Spain oo uu sharcigu dhigayo in aanay wada ciyaari karin laba kooxood oo isku waddan ah wareegga 16ka, sidoo kalena iskuma beegmi karaan naadiyada kaalmaha koowaad kaga soo gudbay hormooyinkooda, sida Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, Juventus, Lille iyo Ajax. Hase yeeshee, Los Blancos ayaa ku aadi karta kooxaha sida Chelsea iyo PSG.
Wargeyska Marca waxa uu saadaashiisa ku sheegay, in Real Madrid ay u badan tahay inay isku dhacaan Chelsea, halka kooxda Paris Saint-Germain ay iyadana saadaasheedu u cadcaddahay inay isku dhici doonaan Manchester United ama Liverpool.
Si kastaba, isku-aadka wareegga 16ka Champions League waxa la samayn doonaa maalinta Isniinta, markaas ayaanay koox walba ogaan doontaa naadiga ay ku beegmayso wareeggaas.